COC ကို Auto ကစားခိုင်းထားမယ် (COC/Clash Of Clans Robot For Android/APK FREE) ~ ဘလော့ခရီးသည်
COC ကို Auto ကစားခိုင်းထားမယ် (COC/Clash Of Clans Robot For Android/APK FREE) ဆိုတဲ့ COC သမားတွေအတွက် Application ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ဒါလေးကတော့ COC ကို
ရူးသွပ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ.. ဒီကောင်လေးကတော့ coc ကိုကစား
ဖို့ပျင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်.. မအားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် .. သူက auto ကစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ Trial အနေ
နဲ့ တစ်နာရီသာ ကစားခွင့်ရပြီးတော့ အချိန်ပြည့်ကစားချင်ရင်တော့ ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်.. နာရီအနည်းင
ယ်အတွက်ကတော့ အကောင့်အသစ်တွေ ဖွင့်ပြီးတော့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်.. အကောင့်အသစ် တစ်ခါဖွင့်တို
င်း တစ်နာရီ Free ခိုင်းလို့ရပါတယ်.....
Download From Here Dummysprit apk
ပြီးရင် apk ကိုဖွင့်ပါ.. အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ပြသွားပါ့မယ်..
login ဝင်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ် Register ကိုနှိပ်ပြီးတော့ အကောင့်အရင်ဖွင့်ပါ
အကောင့်လုပ်တာ လွယ်ပါတယ် နမူနာပြထားပါတယ် password ကို ဂဏန်းတွေချည်းပဲ
ပေးတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်..invite code ကိုတော့ 822843ကိုထည့်ပေးပါ success ဖြစ်သွားရင် Login ဝင်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ် ဝင်လိုက်ပါ..
login ဝင်ပြီးသွားတာနဲ့ COC robot ကို Run လိုက်ပါ COC ပွင့်လာပြီးတော့..
Tip တွေပြောပါလိမ့်မယ် Confirm နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အကုန်မိမိစိတ်ကြိုက် Setting လုပ်ပြီးတော့ Start ကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. အကုန်လုံးကို သူကိုယ်တိုင် အ
လိုလျောက် ဆက်လက် လုပ်ပါလိမ့်မယ်.. အဆင်ပြေကြပါစေ
တစ်နာရီထက် ပိုလိုချင်ရင်တော့ ဝယ်ပါ.. မဝယ်ချင်ရင်တော့ သူငယ်ချင်း ၁၃ ယောက်ကို Invite လုပ်ပြီးေ
တာ့ Register လုပ်ခိုင်းပါ.. Register လုပ်တိုင်း မိမိ invite Code ကိုထည့်ခိုင်းပါ 260bean ရပါမယ်။။ ကျွ
န်တော်ပေးထားတဲ့ Code ကိုထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်. 50bean ရပါမယ်.. စုစုပေါင်း 310Bean ရပါပြီ.. ဒါဆိုရ
င်တော့ Robot ကိုတစ်လစာ ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ။မိမိအတွက် Invite Code ကိုတော့ User Profile
Posted in: COC ဆိုင်ရာ